गर्भावस्थामा पोषणः कति खानु ठीक ?
साउन १३, २०७४ शनिवार ०१:४४:०० प्रकाशित
लन्डन– अधिकांश महिलालाई गर्भावस्थामा कति खाने भन्ने जानकारी हुँदैन । बेलायतको नेसनल च्यारिटी पार्टनरसिपले गरेको एक सर्वेक्षणमा यस्तो निष्कर्ष निस्किएको छ।
सर्वेक्षणमा आमा बन्न लागेका महिलामध्ये ३३ प्रतिशतलाई मात्र गर्भावस्थामा खानेकुरा कति खाने जानकारी रहेको पत्ता लागेको हो । बेलायतमा सार्वजनिक स्वास्थ्यको अनुगमन गर्ने संस्था नाइस (एनआइसिई) ले दिएको सुझाव अनुसार गर्भावस्थाका अघिल्ला ६ महिनामा महिलालाई अतिरिक्त क्यालोरीको आवश्यकता पर्दैन।
तर, गर्भावस्थाको अन्तिम ३ महिनामा भने महिलाहरूले दैनिक २ सय क्यालोरी बराबर थप खानेकुरा खानुपर्छ । ओलिभ आयलमा सेकेका दुई वटा ब्रेड (पाउरोटी) खाँदा २ सय क्यालोरी पाउन सकिन्छ।
नेसनल च्यारिटी पार्टनरसिपका अनुसार, गर्भावस्थामा गर्नुपर्ने खानपानबारे गर्भवतीहरूलाई हेक्का छैन।
सर्वेक्षणमा सहभागी २१ सय महिलामध्ये ३३ प्रतिशतले गर्भावस्थाको अवधिभरि दैनिक कम्तीमा ३ सय वा त्यसभन्दा बढी क्यालोरी चाहिने बताएका थिए।
सामान्यता गर्भावस्थाका बेला दुई जनालाई चाहिने भोजन गर्नुपर्छ भन्ने आम धारणा छ, एक हिस्सा आफ्ना लागि र अर्को हिस्सा गर्भमा रहेको शिशुका लागि । तर, रोयल कलेज अफ अब्स्टेट्रिसिएन्स एन्ड गाइनोकोलजिस्ट्स (आरसिओजी) सँगको सहकार्यमा नेसनल च्यारिटी पार्टनरसिपले उक्त प्रचलित धारणा असत्य रहेको प्रमाणित गर्न काम गरिरहेको छ।
कति खानुपर्छ ?
प्रचलित धारणा गलत भए प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए गर्भावस्थाका बेला महिलाले कति भोजन गर्ने त?
गर्भवतीहरूलाई औंसतमा दैनिक २ हजार क्यालोरी चाहिन्छ, जसमा भोजन र पेय दुवै पर्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार, गर्भवतीले सन्तुलित भोजन गर्नुपर्छ । जसमा फलफूल, हरिया तरकारी, कार्बोहाइड्रेट (आलु, भात, रोटी लगायत), प्रोटिन (दाल, माछा, अन्डा, मासु, दूध र दही लगायत) र चिल्लो पदार्थ समावेश हुनुपर्छ।
रोयल कलेज अफ अब्स्टेट्रिसिएन्स एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट्सका प्रोफेसर जेनिस राइमरले गर्भावस्थाका बेला आवश्यकताभन्दा धेरै भोजन गर्दा महिलालाई बेफाइदा हुनसक्ने बताउँछन्।
‘गर्भावस्थाका बेला महिलाहरू यति धेरै मोटाउन सक्छन्, त्यसले गर्दा गर्भपात हुने जोखिम बढ्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेह लाग्ने सम्भावना हुन सक्छ, समय नपुगी बच्चा जन्मन सक्छ र सिजेरियन गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ ।’